SOMALITALK - WARARKII 26/9/2002
Yalaxow oo Caddeeyey Mowqifkiisa Maamulka B&BS
Muuse suudi yalaxow ayaa waxaa uu ku cadeeyay mow qifikiisa laxiriira ku dhawaaqida maamul gobaleedka lamagacbaxay bariga iyo bartamaha somaaliya kaa soo looga dhawaaqay todobaad yadii la soo dhaafay magaalada muqdisho isla mar ahaantaana uu ku saxiixnaa gudoomiyaha kaltanka golaha SRRC mudane Hilowle imaan cumar. GUJI...
Bayaan Beesha Cumar Maxamuud ee London, UK
Waxaa waqtigu noo saamaxay inaan halkaan idin kuu soo gudbino taladayadii ku aadanayd dilkii Suldaan Hurre Allaha u naxariistee hadaan nahay dadkayaga Cumar Maxamuud ee London jooga . GUJI...
SPR oo Codsatay in la Maxkamadeeyo Cabdullaahi Yuusuf
Somali Peace Rally – Ma aha wax qarsoon in kaligi taliye Cabdullaahi Yuusuf ku dhuumaalaysanayo xaafadaha London. Asagoo hadda arrinkiisii ku soo aruuray i-qarshaay i-qarashaay meeshuu hore uga lahaa i-arkaay. Waxa laga qarinayo waa dadkiisi mooyee cid kale ma cayrsanayso, ka dib markuu galay falal dambiyeed ka soo hor jeeda xaquuqul iinsaanka. GUJI...
Maxaa ka soo baxay shirkii Johannsburg, S-Africa
Ma yareeyn intii leeysku hayey sidii ajande ku haboon dhamaan caalamka loogu suubin lahaa xaga horumarka, deegaanka iyo caafimaadka (sustainable development). Inkastoo sanadkii 1992, Agenda 21 dhib badan laga maray sidii leeysugu raaci lahaa, gaar ahaan wadamada danyarta ah oo soo jeediyey in loo . GUJI...
Warsaxaafadeed Kasoo Baxay Xarunta Dr ismaaciil jimcaale
Xarunta Dr Ismaaciil Jimcaale ee xaquuqda aadanaha u dooda ayaa cambaaraysay kuwa gaysanaya xadgudubyada damiiriga ah ee ku dhaca dadka aan hubaysnayn gaar ahaan afduubyadii loo gaystay C/ raxmaan Max’ed Sheekhey iyo Max’ed Aweys Macaane iyo dilkii C/sangaab Jimcaale oo ay ku dileen suuqa dhuxusha lagu iibiyo ee degmada Shibis.. GUJI...
Codka Beesha Oo Macalin Siciid Saalax Waraysi La Yeeshay.
Barnaamijkii codka beesha ee galabta ayaa intiisa badan lagu soo qaatay waraysi dheer oo ay bahdu la yeelatay Macalin Siciid Salax Axmed oo dhawaan kasoo laabtay shirkii Barayaasha Wuqooyiga Yurub . GUJI...
Waa leeysku heeystaa tirada dadka iyo kheeyraadka dunida:
Ugu horeeyn, waxaan aad ugu abaal hayaa dalkii iyo dadkii nagu soo daalay iyo nadaamka iyo dariiqa fasaxaya in qofku asagoo leh dal iyo dad uu u dhashay eey hadana suuragal u tahay inuu ku noolaado meesha uu ka helayo nabad iyo nolol. Ha hilmaamin in aniga iyo adigaba aan marti u nahay(si toos ah /dadbanba) dal asal ahaan eeynaan u dhalan oo nabad, naxariis, iyo horumar kalla duwan(cidii kasbatay/nasiib u yeelatay) aan kalla kulanay... GUJI...
Soomaali Aragtaa Yaab Aragtaa!
Waxaan ogsoonahay in aay bulshada soomaaliyeed hide u leedahay ineey wixii aqbaar ah hab oral ah isugu tabiyaan, habdhaqankaas oo saldhigiisu yahay kutiri-kuteen, hada iyo wixii ka danbeeyna aan rajeeynaayo in laga gudbo, isla markaana la hormariyo hanaanka wax qorista kaasoo soomalida u leh qiimo aad iyo aad u wayn waxtarna u leh. GUJI...
WARARKA KALE EE SEPTEMBER - GUJI